Fanentanana mamy • Fanosotra amin'ny vatana sy fanorana NuRu
Salama, Bella no anarako. Avy any Etazonia aho, indrindra ny California. 24 taona aho. Tiako ny manao spaoro fanatanjahan-tena, manana fikitika za-draharaha aho. Mamy sy voadio aho, tiako ny fifandraisana amin'ireo mpanjifako. Saro-kenatra sy miala sasatra ny otra ataoko, mandriaka be ny atmosfera. Tiako ny milalao menaka fanorana sy ny fomba fanorana isan-karazany. Tiako ihany koa ireo atmosfera malemy. Ny fanorana ahy dia tena vehivavy sy ara-nofo, tadidin'ny mpanjifako foana ny fanotra nataoko. Manana fiolanana nofinofy aho. Tsara ny vatako, mpanotra tena manintona aho ary tiako ny mitafy akanjo izay voafetra ny erotisma. Manam-pahaizana amin'ny fanorana aho, heveriko fa izaho no mpanotra tsara indrindra ho anao. Nantsoin'izy ireo hoe hatsarana amerikana aho indraindray. Inona no andrasanao?
Miroboka amin'ny hafaliana miaraka amin'ny fanorana ataonay - miala sasatra nefa miaraka amin'izay koa traikefa nahafinaritra. Ity fitsaboana ity dia manomboka amin'ny fandroana, izay handanianao 10 minitra hanafananaana sy hampihenana ny hatsiaka. Ny rano ady dia hanala ny havizanana amin'ny fanaonao isan'andro ary hanomana ny vatanao amin'ny fahafinaretana tsy hay hadinoina. Hotohizina ao anaty fandriana milamina izay ahitanao 60 minitra fanorana vatana be dia be ny fiainanao. Ireo masseuse manahirana sy marani-tsaina ao amin'ny efitranonanay dia hampiasa ny fomba rehetra amin'ny teknika fanorana sy erotika be pitsiny mba hahatonga anao hahatsapa fahafinaretana feno hafaliana. Ny tanan'ilay mpanotra masaka sy marefo dia hampiala ny hozatra reraky ny vatanao ary hanafaka ny angovo ara-nofo voahangona ao aorina ambany. Ny faritra tsirairay amin'ny vatanao dia hahatsapa ny fialan-tsasatra farany miaraka amin'ny fientanam-po mahery vaika.
Aorian'ny fanorana mandritra ny adiny iray manontolo dia ho vonona ianao hiatrika ilay fanoherana ny programa, izay 10 minitra tsy mampino amin'ny fanorana amin'ny vatana. Ny fanorana amin'ny vatana ho an'ny vatana dia fanorana erotika izay anananao fanentanana amin'ny vatana iray manontolo. Tsy toy ireo karazana fanorana hafa, ny faritra rehetra amin'ny vatanao hatrany ambony ka hatrany an-tongotra, anisan'izany ireo faritra miafina, dia hososehin'ny vatana manja sy tsara tarehy iray amin'ny masseuse ara-nofo sy mafana an'ny efitranonay.
Ny menaka fanosotra AROMATIKA dia hahatonga ny hoditrao ho sondriana amin'ny fikasihan-tànana ny masseuse mba hahafahan'ny vatany hisolelaka kely amin'ny vatanao manome ny vatanao mba hahafaly anao.
Rehefa avy nahatratra ny tampon'ny fifaliana nandritra ny fotoam-pitsaboana fanatanjahan-tena, ity fitsaboana ity dia ho vita amin'ny fandroana ara-nofo haingana miaraka amin'ny mpitsabo antsika hanala ireo menaka fanorana. Ny fanorana mandro dia manampy anao hamoaka ny adin-tsaina amin'ny fiainanao andavanandro ary hampivadika ny sainao ho amin'izao tontolo izao amin'ny fahafinaretana avo lenta. Afa-tsy ny fanandramana ara-nofo tsy hay hadinoina, ny otra mandro dia manana tombony ara-pahasalamana amin'ny fanorana kilasika.
MASOTRA EROTIKA AO PARIS
Ny salon erotika erotika dia miasa 24/7. Midika izany fa afaka miala voly amin'ny fotoana rehetra ianao. Mifandraisa aminay amin'ny telefaona fotsiny mba hampahafantatra momba ny fotoana fitsidihana sy ny fanirianao. Amin'ity dingana ity dia mila mifidy ny karazana erotika ianao, mamaritra ny isan'ny zazavavy ary lazao raha ilaina ny serivisy fanampiny - striptease, ny mety hikasika, ny oroka na ny safidy hafa. Ao amin'ny fizarana "Fanampiny" ao amin'ny pejy "Karazan-tsininy sy vidiny."
Raha manana fisalasalana ianao ary tsy fantatrao izay mpanolo-tsaina tokony hisafidy, dia faly ny mpanolo-tsaina anao manampy anao hanapa-kevitra. Lazao anay fotsiny ny fanirianao - fanorana maivana, mahery vaika, fitsaboana, fitsaboana ankapobeny na hafa. Ny fanontaniana mahaliana rehetra dia azo apetraka amin'ny telefaona. Raha mila tahiry ho an'ny fifandraisana, zahao ny fizarana "Contacts".
Efa manantena zazavavy ianao. Mivory eo am-baravarana izahay. Mba hanarahana ny fepetra takiana amin'ny fahadiovana dia manasa ny mpanjifa izahay handro. Hanana lamba fanasana lamba savony, savony, kapaoty azo esorina ianao. Tena ahazoana aina.
Ankoatr'izay, ny mpitantana anay sariaka sy mahalala fomba dia hanao fakan-kevitra fampidirana fohy raha mitsidika ny salon de erotic érotika ianao amin'ny voalohany. Taorian'ny fampahalalana - fihaonana amin'ireo zazavavy. Azo zahana an-tserasera amin'ny Internet ny sary. Rehefa avy misafidy ianao dia mandeha mankany amin'ny fandroana ary avy eo amin'ny efitrano manokana hisotroan-dronono ary hahazo fahafinaretana ara-nofo.
Manome serivisy feno arakaraka ny fandaharana voafantina - ny masseuse - "Fahafinaretana roa", "Eoropeana", "Ho an'ny vehivavy", fanorana Nuru, fanorana amin'ny vatana na hafa. Ny fotoam-pivoriana tsirairay dia manomboka amin'ny fomba fitsaboana akupunktur maivana. Io dia ahafahanao manala ny adin-tsaina, miala sasatra ny mpanjifa ary manomana azy amin'ny fifaliana bebe kokoa. Ny menaka atsinanana voafantina tsara sy manitra dia manatsara ny fahatsapan'ny olona. Ny fikasihan'ny mpanotra aza dia manome fahasambarana lehibe kokoa. Avy eo ny zava-drehetra dia mitranga araka ny nomen'ny programa voafantina. Ity dia mety ho dihy manokana, fandroana iraisana, oroka, fanorana erotika Thai na serivisy hafa izay tsy misy firaisana ara-nofo mivantana. Manala ny havizanana ny fanorana. Ny valiny isaky ny safidy programa dia tsy miova.
NAHOANA IANAO NO tokony hanafarana MASOTRA EROTIKA SERVICES:
Izany no fifohazan'ny filan'ny nofo;
Fanamafisana ny hery fiarovan'ny vatana;
Fampihenana ny fanaintainana;
Fanatsarana ny hery ananan'ny lehilahy;
Fanamaivanana ny alahelo sy ny adin-tsaina;
Mahatratra ny teboka mahafaly indrindra.
75013 Paris, Frantsa
Alahady: 10: 00 AM - 11: 00 PM